ထောက်တည်ရာရသွားပြီ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
သိပ္ပံဒဿနပညာ – ၀၁ →
Posted on March 27, 2016 by chitnge
ရုပ်နာမ်ရှိထားတဲ့ လူသား အနိစ္စတစ်လုံးကြောင့် ထောက်တည်ရာ ရသွားတယ်။
ရုပ်နာမ်ဆိုကတည်းက ထောက်တည်ရာက အတော်ခက်တယ်။ ဒုက္ခတုံးကြီး မဟုတ်လား ???
သမုဒယ၊ တဏှာ သကြားကွပ်ထားလို့သာ ဒုက္ခကို ဒုက္ခမှန်း မသိကြတာ။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ရဲ့ အဖြစ်မှန်က ဒုက္ခပဲ။ ဒီဒုက္ခက လွတ်ဖို့ဆိုတာက သူ့ကို အနိစ္စတင်ဖို့ပဲ – မမြဲဘူးဆိုပြီး ထွက်ရတာ — အပျက်နဲ့ ထွက်ရတာပဲ။
အပျက်နဲ့ထွက်တဲ့အခါကျ ဒုက္ခအဆုံး ရောက်သွားရင်တော့ လွတ်မြောက်သွားတာပဲ။ ဒုက္ခအဆုံးရောက်အောင်တော့ အပျက်ကို ဇွဲနဲ့ရှုရမယ် – “ပျက်တယ်” ဒါပဲ။ သူ့ကိုမလိုလားနဲ့၊ မမှီခိုနဲ့၊ မလှဲလျောင်းနဲ့၊ မခံစားနဲ့၊ ပျက်တယ် – ဒါပဲ။ ပျက်တယ်၊ ပျက်တယ်နဲ့ အပျက်က လမ်းပြသွားတာ နောက်ဆုံးကျ အပျက်ဆုံးတော့ ဘွားဆို မပျက်တဲ့ဓာတ်၊ အနုတ္တရဓာတ်၊ အသင်္ခတဓာတ်ကို တွေ့ရတာပဲ။
ပျက်တယ်လို့ရှုတဲ့ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် အပြည့်အ၀က နောက်ဆုံးတော့ နိဗ္ဗာန်ကြီးကို တွေ့မြင်သွားတာပါပဲ။ ဒီတော့ ထောက်တည်ရာရပြီ။ ထောက်တည်ရာဆိုတာ ဘာလည်းဆိုတော့ “ရုပ်နာမ်ဟာ ပျက်တယ်” ဒါပဲ — ရုပ်နာမ်ကတော့ ဖက်တွယ်စရာ မကောင်းတဲ့ ဒုက္ခတုံးကြီးပဲ။
ဒီတော့ အပျက်နဲ့သာရှုလို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပေးအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရိုးရိုးစင်းစင်း အမှန်အကန် တရားကျင့်စဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, တဏှာ, နိဗ္ဗာန်, ဗုဒ္ဓဘာသာ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ. Bookmark the permalink.